आयोजना निर्माणप्रति उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित | गृहपृष्ठ
Home विकास आयोजना निर्माणप्रति उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित
आयोजनाबाट स्थानीय उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रले समेत लाभ लिन सक्ने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि हर्षित भएका छन् । ठूलो लगानीको आयोजना भएकाले जिल्लाकै समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव पविन्द्रकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । आयोजनासँगै विकास र लगानीको अवसर पनि जोडिएकाले जिल्लाका उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजनाको सफलतासँग जिल्लाको भविष्य जोडिएकाले यसलाई सफल पार्र्न प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने ।
आयोजना प्रभावित पनि खुशी
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पनि निर्माणका विषयमा भएको प्रगतिबाट उत्साहित छन् । तनहुँ बेलवासका यमबहादुर आलेले स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाउने र विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग मिल्ने भएकाले आयोजनाको निर्माण आफूहरूका लागि खुशीको कुरा रहेको बताए । साथै आयोजना निर्माणपूर्व नै विभिन्न माग राखेर अवरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई जिल्लामा दोहोरिन नदिन स्थानीय तहमा पहलसमेत भइरहेको छ । स्थानीयकै पहलमा केही सरोकार समितिलाई एकीकरणसमेत गरिएको छ । आफूहरूले बाँकी सरोकार समितिलाई पनि एउटै बनाएर एकीकृत ढङ्गबाट अघि बढाउन पहल गरिरहेको आलेले बताए । आयोजना निर्देशक आचार्य पनि शुरूदेखि नै जिल्लाबासीबाट सहयोग मिलेको र आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म पनि यस्तै सहयोग पाउने आशामा रहेको बताउँछन् ।
आयोजानको आर्थिक पक्ष
 आयोजनाको लागत अनुमान : रू. ४३ अर्ब
 ऋण सम्झौता भइसकेको
 जापानी सहयोग नियोग जाइकाबाट रू. १३ अर्ब ६५ करोड
 ऋण सम्झौता हुने क्रममा रहेको
 एशियाली विकास बैङ्कबाट रू. १३ अर्ब
 यूरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कबाट रू. ६ अर्ब
 दुबईको आबुधाबी फण्डबाट रू. २ अर्ब ६० करोड
 नेपाल सरकारबाट अपुग (रू. ७ अर्ब ७५ करोड) लगानी (प्रतिबद्धता)